Iska ilaasha daan-daansiga caado-qaatayaasha maqaarka madoow | Somaliska
Maalinta barito ah waxaa xaafada Rinkeby ee ka tirsan Stockholm halkaasoo ay ku badanyihiin Soomaalida lagu qaban doonaa bandhig ay soo jeedinayeen qolo cunsuriyiin ah oo diinta Islaamka neceb kuwaasoo ay hor-kacayaan caado-qaateyaal Soomaali ah oo diinta ka baxay. Dhacdadaan ayaa imaanaysaa dhowr maalmood ka hor dhalashada bisha Ramadaanka, iyadoo loo isticmaalayo in lagu cambareeyo Muslimiinta iyo Islaamka.
In cunsuriyiintu ay diinta Islaamka iyo Muslimiinta necebyihiin mid la yaab ah ma ahan balse arinta laga caroodo ayaa ah in ay hor socdaan Soomaali sheeganaysa in ay isaga bexeen diinta Islaamka isla markaana ay qaateen diinta Kiristaanka. Soomaalidaas ayaa waxaa beryahaan ugu afdheer haweeney lagu magacaabo Mona Walter oo markii hadalkeeda aad dhagaysato aad dareemayso in heerka aqoonta ay u leedahay diinta ay ka baxday iyo mida ay qaadatay in ay aad u hooseyso, oo ay ka buuxdo carro iyo xumaanta ay u qabto Islaamka iyo qaasatan dadka Soomaalida, iyadoo meelkasta oo ay tagto been abuur ka faafisa Soomaalida ku dhaqan Sweden.
Soomaalida nuucaan ah ayaa lagu tilmaamaa kuwo caado-qaateyaal ah oo aysan dhab ka ahayn diinta ay qaateen balse ay ka tahay sidii ay dhaqaale iyo magac uga heli lahaayeen dadka ay hor socdaan. Balse doqonimada iyo dulinimada dadkaan ayaa ah in aysan ogayn in iyaga xitaa ay necebyihiin cunsuriyiintu, oo aysan waligood aqbali doonin in ay ku heeryihiin xag diimeed iyo darajo midna.
Caado-qaateyaasha la midka ah Mona Walter ayaa waxay Rinkeby u imaanayaan in ay daandaasi ku sameeyaan Muslimiinta isku diyaarinaysa soo dhaweynta Ramadaanka, iyadoo ay muhiim tahay in aan laga jawaabin daan-daansigooda, oo waliba jawaabta ugu wanaagsan ay tahay in aan loo tagin , la dhagaysan, waxna lagu darsan. In laga doodo diimaha waa arin wanaagsan balse in lala doodo caado-qaatayaal maqaarkeena xiran sharafteena ayay hoos u dhigaysaa.
allaah baan kamagan galnay sharkeeda iyo sharkalebo
Marka hore wallaal Jimcaale warka aad soo qortay waa mid aan beryahaanba iga dhax guuxayey.
Runtii si wanaagsan baad u faahfaahisay. Aduunka waxaa ku nool dad badan oo aaminsan diimo kale, duwan waa sida ay iyaga u yiraahdaan. Anaga haddaan Muslimiin nahay ma aaminsanin in diin aan ahayn diinta Islaamka jirto, iyagana sidoo kale ayeey u aaminsanayn in diin kale jirto. Gabadhaan waxay leedahay aniga diinta Islaamka waan ka baxay oo mid kale baan yeeshay. Gabadhaan waxay tiri dadka kirishtaanka way illa yaaban yihiin oo waxay igu leeyihiin “Diintaada Kirishtanka ku mushquul oo iskadaa diimaha kale oo aad caayayso” Waa yaab!!! Waxay tiri ma dayn karo in aan caayo Islaamka oo maslaxadeeda ayaa ku jirta haddii kale Qatar baan galayaa. Imaashaha ay imaanayso Stockholm waa mid qorshaysan oo ay ku doonayso in indhaha aduun waynaha ay ku soo jeediso Muslimiinta qaasatan soomaalida.
Aniga gabadhaan waxaan u arkaa qof caawin caafimaad u baahan.
1-Yaan la tegin meesha ay joogto
2-Yaan la tegin meesha ay joogto
3-Yaan la tegin meesha ay joogto.
June 15, 2015 at 00:46
ilaahay ayaan ka magan galnay sharka ay la wareegayso iyada iyo kuwa la maca ah ah.
ilaahow diinta islaamka u hiili oo kor uqaad. ilaahow muslimiita oo dhan xafid aduun iyo aakhiroba Aaamiin ..ilaahaow Dadka muslimiinta oo ku nool Falastiin iyo Ciraaq iyo Syria iyo Yemen iyo Liibiya iyo Somalia XAFID Aamiin iyo dhamaan geyiga muslimiintu degto Aamiin.
June 15, 2015 at 00:50
Asc Tan hadalkeeda meel iga dhig wan ku daalnay hadalkeeda xun ka hadlid maleh haalkeeda qofkow ku weyn yahay iyada daaleyso codsi ahaan barnaamisho taxane ah ow taarikh ah noo soo gudbi haay si aan u faa iideysano ama dhiiri kelin dhanka wax barashada ah sida qofka wax u barakaro sida qofka hamigeeda ku kaari karto 100% waad mahad santahay dadaalkaaka waxan ku leehay meeshada ka sii wad
Ilaahey ha inaga qabto sharteeda ramadaanja fadligiisa calaamad alah tusiyo oo deg deg ah ilaahey idinkiisa ilaahayaw islaamka kor ja yeel
Habaar waxba ma taro haloo daayo mabda eeda iyada iyo wixii kuraacsan.
Waxba looma baahna in latuso nacayb. ilaah ayaa joogo. oo difaacaya wixii saxa.
idinku haku dan baabina un´ amaan iska siiya gabartaan.
wax lacag lasiiyo maleh, dadkaani waa dad ku daalay diinta islamka ama uu dhib saameeyey noloshooda intii udanbeysey ee dalku bur burey ee lasoo aaday qurbaha.
sweden lacag bilaa macne kuma dhiibaan, ee inagaa uqabna wax walba inay lacagi ka danbeyso. Dadka nacayb ayaa kujira, waa in la ogaadaa sababta jirta.
inta aan wax lagu tilmaamin. kontrolla afkiina waxa ka baxaya, meeshaan waa la ilaashadaa. hadii kale waxaa loo turjumayaa swedish, luuqadiina markaa waxaa la arkayaa waxa la idin kusheegayo.
Ciwaanka ayaa ka turjumaya umad somaliyeed oo loo qabo nacayb, sababtuna ay tahay inay ka baxeen islam ,, in loogu yeero: Iska ilaasha daan-daansiga caado-qaatayaasha maqaarka madoow. hadhow waxaa markaa imaanaysa maxkamad iyo in la waydiiyo waxa uu ula jeedo qoraagu hadalkiisa kor ku xusan.
diinta islaamka cid waxyeeli kartaa ma jirto ilaahay ayaa ilaashanaya iyagana ilaah sharkooda ha inaga nabad galiyo qoraagunu aad buu u mahad sanyahay
diinta ilaah ilaah ayaa ilaashada taasi waxba uma geysan karto